ho Best Screw conveyor, Xiaolong ascenseur, vovoka famahanana milina, helika-screw conveyor / mandeha ho azy famahanana ny ara-materialy fanaraha-maso Manufacturer sy Factory |Xingyong
Screw conveyor, Xiaolong ascenseur, vovoka famahanana milina, helika-screw conveyor / mandeha ho azy ny sakafo ara-materialy fanaraha-maso
Screw Conveyor Antsoina koa hoe xiaolong Hoist sy spiral Blade Ffedet dia afaka manavao ireo akora vovoka isan-karazany.
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny milina famonosana na fitaovana mifandraika amin'izany mba hahatsapana ny vy vy 304.
Famahanana mandeha ho azy ny fanaraha-maso ara-materialy.Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fotoana hafa afa-tsy amin'ny maotera sy ny fitondra, ny ambiny dia natao.
Fampiasana vokatra: mety amin'ny fampitaovana akora vovoka maina tsy mipetaka sy akora mando mifangaro kely ary akora madinika kely, toy ny: vary, vovo-dronono sira, lafarinina soja sns. Fampiharana: mety amin'ny fampitana fitaovana vovoka maina tsy misy cohesion, kely ny akora mifangaro mando sy ny poti kely ny fitaovana, toy ny vary, ronono vovoka sira, soja vovoka, sns vokatra vokatra sy.
1. Ny milina famahanana dia mampiasa ny motera lehibe indrindra ho an'ny fihodinan'ny herinaratra sy ny motera rotary vibration ho toy ny hery fanampiny amin'ny sakafo, izay azo sarahina misaraka ary azo fehezina misaraka, ary azo atambatra ny fanaraha-maso ivelany.
2. Miaraka amin'ny hetsika fanaraha-maso tsy miankina E-boaty, mitahiry seranana fanaraha-maso ivelany dia afaka miasa tsy miankina na amin'ny andian-dahatsoratra miaraka amin'ny fitaovana fanohanana othel, mety sy tsotra.Ny habetsahan'ny fanaterana dia azo ovaina amin'ny fotoana rehetra araka ny fepetra takiana.Ny fitaovana dia tsy mora tetezana ary manana adaptability matanjaka amin'ny fitaovana;
3. Ny silo sy ny sodina fampitana dia natao hisaraka, ny rafitra dia mitombina, ny fandefasana sy ny fampidinana dia mora, ary ny fitaterana dia mety.
4. Ny endrika tsy manam-paharoa sy voaisy tombo-kase tsy manam-paharoa dia mitazona ny fifindran'ny vovoka amin'ny vovoka sy ny abrasion.
5. Natao hanamora ny fanadiovana ny sisa tavela: ny spiral dia afaka mamadika ny fivoahana, ny farany ambany amin'ny fantsona fitaovana dia manana ny vavahady fivoahana, ary ny spiral iray manontolo dia azo disassemble, diovina, apetraka ary tazomina amin'ny dingana tsotra vitsivitsy.
6. Araka ny tontolo iainana fampiasana, ny toetra ara-materialy dia manome fomba isan-karazany ho an'ny mpanjifa hisafidy.
Anaran'ny milina Screw conveyor
MODELY XY- LG15
Fahaizana famokarana 3 m³ /H 5 m³ /H 7 m³ /H 12 m³ /H
Herin'aratra 0.81KW 1.56KW 1.56KW 2.2KW
Firafitry ny milina
#304 Stainless vy
Dingana tokana, dingana roa na dingana telo 180-220V, dingana telo 350V-450V, 50-90Hz
Angle de incline
45 degre ho an'ny fenitra, dia afaka mpanjifa ho an'ny 30 na 60 degre.
Ny haavon'ny fivoahana
2200mm standard, misy hafa
Lanja milina 130KG / 180KG / 230KG / 270KG
teo aloha: Rotary Bottle Sorting Machine tavoahangy PET, tavoahangy fitaratra, vokatra am-bifotsy,
Manaraka: Hot sale single-bucket ascenseur Single hopper siny ascenseur, iray hopper siny conveyor / manaiky ny rojo refueling lifting fitsipika
Conveyor Screw mitsivalana
Plastika Screw Conveyor
Conveyor kely visy
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Fonosana Belt Conveyor, Belt Conveyor elektrika, Skirt Belt Conveyor, Stainless Steel Screw Conveyor, Tubular Belt Conveyor, Belt Conveyor, Ny vokatra rehetra